तपाइँको अनुहारभन्दा हात कालो छ ? यसरी गोरो बनाउनुहोस् - Birgunj Sanjalतपाइँको अनुहारभन्दा हात कालो छ ? यसरी गोरो बनाउनुहोस् - Birgunj Sanjalतपाइँको अनुहारभन्दा हात कालो छ ? यसरी गोरो बनाउनुहोस् - Birgunj Sanjal
तपाइँको अनुहारभन्दा हात कालो छ ? यसरी गोरो बनाउनुहोस्
२९ आश्विन २०७६, बुधबार ०९:२५
एजेन्सी । अनुहारको सुन्दरता कायम राख्न अनेक उपाय अपनाउने कतिपय व्यक्ति हातखुट्टाको सुन्दरतामा खासै चासो राख्दैनन् ।
एकातिर अनुहारको केयर नगर्नु तथा अर्कोतिर घाम र धुलोले डढ्नु र फुट्नु हातको सुन्दरता बिग्रिने कारण बन्छ ।
तपाइँको पनि अनुहारको तुलनामा हात नराम्रो भएको छ अर्थात हात कालो छ भने, घरमै यसरी हातलाई चम्किलो बनाउन सकिन्छ ।